Hevitra lehibe rehefa mifantina ny rafitra fivarotana (POS) | Martech Zone
Fiheverana lehibe rehefa mifantina ny rafitry ny varotra (POS)
Zoma, Desambra 27, 2019 Zoma, Desambra 27, 2019 Douglas Karr
Ny vahaolana Point of sale (POS) dia somary tsotra ihany, saingy misy safidy maro isan-karazany ankehitriny, ary samy manasongadina fiasa tsy manam-paharoa. Matanjaka serivisy fanamarihana fivarotana afaka manao ny orinasanao hahomby kokoa ary hisy vokany tsara eo amin'ny farany ambany.
Inona no atao hoe POS?
A Fivarotana Ny rafitra dia fitambaran'ny fitaovana sy rindrambaiko ahafahan'ny mpivarotra mivarotra sy manangona vola amin'ny fivarotana toerana. Ny rafitra POS maoderina dia mety ho miorina amin'ny rindrambaiko ary afaka mampiasa telefaona finday, takelaka, na birao. Ny rafitry ny POS nentim-paharazana dia mazàna ahitana fampitaovana arahin'antoka amin'ny alàlan'ny fanohanan'ny efijery mikasika sy fampidirana vatasarihana.
Ity lahatsoratra ity dia handrakotra izay rehetra tokony ho fantatrao raha te hisafidy ny rindrambaiko teboka mety amin'ny varotra ho an'ny orinasanao. Miaraka amin'ny vahaolana maro isan-karazany misy, zava-dehibe ny fanaovana fikarohana mialoha sy hamantarana izay mifanaraka amin'ny filàn'ny marikao.
Tena ilaina ve ny teboka iray amin'ny rafitra fivarotana?
Ny orinasa sasany dia manandrana mampihena ny vidiny amin'ny alàlan'ny fanaovana nefa tsy misy vahaolana amin'ny varotra, fa io fampiasam-bola io dia manana mahazo vola ho an'ny orinasanao. Ny vola kely laninao amin'ny famandrihana dia tsy misy dikany raha oharina amin'ny fotoana sy vola hohazoninao isaky ny andro fiasana.
Ho fanampin'ny fanamorana ny fifanakalozana, ny rindran'asa fivarotana amin'izao fotoana izao dia manolotra fitaovana goavambe natao mba hampandeha tsara ny lafiny rehetra amin'ny orinasao. Raha te hifantoka amin'ny fifandraisan'ny mpanjifa ianao, ohatra, dia afaka mahita vahaolana amin'ny varotra izay misy programa tsy fivadihana sy lafin-javatra lehibe hafa. Ankoatr'izay, serivisy maro no mirindra tsara amin'ny rindranasa malaza hafa toa ny Shopify sy Xero.
Rafitra samihafa ho an'ny orinasa samihafa
Ny serivisy point of sale dia mikendry orinasa marobe isan-karazany ao anatin'izany ny mpivarotra an-tserasera sy ny orinasa misy magazay ara-batana. Miaraka amin'izany ao an-tsaina dia tsy tokony hanana olana amin'ny fitadiavana safidy mifanaraka amin'ny teti-bolanao sy ny haben'ny marikao ianao.
Ankoatr'izay dia mihamaro hatrany ireo rafitra mifindra mankany amin'ny fomba mifototra amin'ny rahona izay manaparitaka vaovao amin'ny alàlan'ny fanapahana azy amin'ny fitaovana tsirairay. Raha mbola misy ny rafitra nentim-paharazana, fifandimbiasan'ny rahona miha malaza hatrany.
Hevitra lehibe 5 rehefa mifantina POS
Hardware - Rafitra fivarotana samihafa no natao mba hiasa amin'ny karazana fitaovana samihafa, ary mila mandinika ny vidin'ny fitaovana ianao rehefa mampitaha ny safidinao. Raha afaka mihazakazaka ny POS amin'ny telefaona fotsiny ianao, ohatra, dia mampandeha ny fampiasa miaraka amina manampy kely tsy misy overhead. Etsy ankilany, ny programa sasany dia miasa tsara kokoa amin'ny takelaka na fitaovana voatokana, izay mety hitarika fandaniana bebe kokoa. Ankoatr'izay, ny orinasa sy trano fisakafoanana lehibe kokoa dia matetika no mila fitaovana maro karazana, ao anatin'izany ny zavatra toy ny mpanonta printy ho an'ny tapakila, ny terminal amin'ny fitantanana latabatra, sns.
Payment Gateways - Ny fividianana rafitra POS dia tsy midika hoe nampiditra fomba fandoavam-bola amin'ny carte de crédit ianao. Na dia efa namboarina mialoha aza ny ankamaroan'ny rafitra POS ho an'ny mpamaky carte de crédit, ny hafa kosa mety mitaky fanamboarana izay mety handany anao. Mitadiava POS misy mpamaky karatra tafiditra na iray izay afaka miharo amin'ny mpamaky carte de crédit avy amin'ny mpikirakira sy vavahady fandoavanao vola.
Fampidirana antoko fahatelo - Ny ankamaroan'ny orinasa dia efa mampiasa fitaovana famokarana maromaro, ary zava-dehibe ny mahita serivisy serivisy azo amidy izay mifanaraka tsara amin'ny fanao efa misy. Ny fampidirana malaza dia misy ny rafitra kaonty, ny rafitra fitantanana ny mpiasa, ny rafitra fitahirizana, ny rafitra tsy fivadihan'ny mpanjifa ary ny serivisy fandefasana. Ny rafitry ny varotra Square, ohatra, dia mifandray amin'ny sehatr'asa antoko fahatelo amin'ny zavatra rehetra manomboka amin'ny eCommerce ka hatrany amin'ny marketing sy kaonty. Raha tsy misy fampidirana, ny fampidirana serivisy vaovao amin'ny paikadin'ny fikambananao dia mety hanasarotra andraikitra lehibe tsy ilaina. Ny rafitry ny varotra dia miresaka fahombiazana avokoa, noho izany tsy mifanohitra ny fampiasana sehatra tsy mifandray amin'ireo rindranasa hafa. Ohatra, ny manafatra automatique fifampiraharahana amin'ny serivisy fitantanana kaonty dia mahomby kokoa noho ny mamindra azy ireo an-tanana amin'ny apps.
Security - Ny mpanjifa dia mihevitra ny fiainany manokana ho zava-dehibe kokoa noho ny teo aloha, ary ny fanapahana data dia mahagaga fa fahita eo amin'ireo orinasa amin'ny habe rehetra. Matetika ireo mpitantana dia manao ambanin-javatra ny maha-zava-dehibe ny fitazonana ny angon-drakitra azo antoka, ary izany dia mifandraika indrindra rehefa manome fampahalalana saropady toy ny isa amin'ny carte de crédit ny mpanjifa. The Indostrian'ny karama fandoavambola mamaritra ny fenitra azo antoka momba ny fiarovana amin'ny rafitra rafitra fivarotana sy fomba hafa fanodinana fandoavam-bola. Ireo programa fanta-daza amin'ny ankapobeny dia mifanaraka amin'ireo fenitra ireo, saingy afaka mitady fiarovana mahery vaika kokoa ianao, toy ny data tokenization sy end to end encryption. Ny filaminana dia tokony ho iray amin'ireo laharam-pahamehanao indrindra rehefa mitady fampiharana POS azo antoka.
Support - Mety tsy mieritreritra ny fanohanana ho endrika manakiana ianao, fa ny tambajotra mpanohana tsy mahomby dia mety hahatonga ny rafitra fivarotanao ho sarotra kokoa ny mampiasa azy. Ny safidy azo itokisana dia manome fanohanana tsy tapaka ary manampy anao hamaha olana alohan'ny hisy fiantraikany ratsy amin'ny orinasanao. Raha azo atao dia tokony hikaroka serivisy manome fanampiana 24/7 ianao. Zava-dehibe ny fahafantarana fa hisy olona hamaly isaky ny manana olana amin'ny rafitra ianao. Ny rindranasa sasany aza dia manome fanampiana an-tserasera an'ireo mpampiasa vaovao rehefa manangana ny serivisy voalohany. Matetika ny orinasa madinidinika dia mametraka ny fampiasam-bola amin'ny vahaolana amidy, saingy ny famandrihana avo lenta dia azo vidiana amin'ny orinasa saika habe rehetra. Ireto dia vitsivitsy monja amin'ireo anton-javatra mifandraika indrindra tokony hadino rehefa mampitaha ny serivisy amin'ny serivisy.
Tags: rahona POSpos mifototra amin'ny rahonafinday posbola fidiranaposfitaovana posrindrambaiko posefijery kasihina
Ny CMO dia tokony hihetsika amin'ny taona 2020